बर्माका रोहिँग्याको काठमाण्डौमा हालीमुहाली, सरकार किन मुकदर्शक ?::
बर्माका रोहिँग्याको काठमाण्डौमा हालीमुहाली, सरकार किन मुकदर्शक ?
काठमाण्डौ । बर्मामा भएको गृहयुद्धबाट प्रभावित रोहिँग्या समुदाय नेपालमा पनि प्रवेश गर्यो । अवैधानिक रुपमा काठमाण्डौका विभिन्न ठाउँमा आएर बसेका ति समुदायको बारेमा सरकारले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । बर्मामा देशद्रोही र अपराधी घोषित रोहिँग्या समुदाय नेपालमा भने खुलेआम बसिरहेका छन् ।
बर्माका रोहिँग्या समुदाय भागेर अर्को मुलुक पस्ने क्रममा नेपालमा पनि प्रवेश गरेका थिए । उनीहरु सन् २०१३ देखि करिब ७ सयको देखि नेपालमा अबैधानिक रुपमा बस्दै आएको भएपनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । बर्मामा भएको गृहयुद्धको समयमा त्यहाँको सरकारले रोहिँग्या समुदायमाथि देशद्रोहीको आरोप लगाएका थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण नै भएन र अन्य मुलुकमा शरणार्थीको रुपमा पुगे । सोही क्रममा नेपालमा पनि रोहिँग्याको प्रवेश भएको हो ।
काठमाण्डौको कपनस्थित बालुवाखानी, राममन्दिर आसपासका क्षेत्रमा रोहिग्या समुदाय विगत ५ वर्षदेखि आफ्नो प्रभुत्व जमाएर बस्दै आएका छन् । कपन क्षेत्रमा मात्रै अन्दाजी १ सय ७० परिवारकाका ७ सय रोहिँग्या छन् । स्थानीयको जग्गा भाडामा लिएर बसिरहेका उनीहरुले विभिन्न मजदुरी गर्दै आएका छन् । रोहिँग्याका कारण त्यहाँका नेपाली समुदायलाई विभिन्न समस्या आइलागेको छ ।
विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार रोहिँग्याहरुको रुप रंग नेपालीसँग मिल्ने भएकाले अवैधानिक रुपमा नेपाल छिर्न सफल भएका हुन् । यसरी अवैध रुपमा शरणार्थीहरु आउँदा नेपालको आन्तरिक मामलामा असर पर्ने सुवेदीको तर्क छ । शरणार्र्थीहरु बढ्दै गएभने आन्तरिक सुरक्षामा खतरा हुनुका साथै सास्कृतिक पहिचानमा समेत धक्का लाग्ने सुवेदी बताउँछन् ।
अन्य मुलुकहरु रोहिँग्या समुदायको विषयमा गम्भीर बनिराखेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भने वेवास्ता गरेको सुवेदी बताउँछन् । स्थानीय निकायले पनि रोहिँग्या समुदायको बारेमा चासो देखाएको छैन ।
नेपालमा आएका रोहिँग्याले शरणार्थीको दर्जा भने पाएका छैनन् । नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको दर्जा दिएको छ । अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुलाई ‘शहरी शरणार्थी’को संज्ञा दिइने गरेको छ । तथापि, त्यो नेपाल सरकारको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग ९युएनएचसीआर०ले दिएको संज्ञा हो ।
उपनिर्वाचन मंसिर १४ मा पक्का, विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने